Cyclical stocks yekudyara mumusika wemasheya Ehupfumi Zvemari
Cyclical masheya ekudyara mumusika wemasheya
Chokwadi pane kanopfuura kamwe chiitiko iwe wakambonzwa chimwe chinhu nezve cyclical stock asi usingazive izvo zvazviri uye chii chakanyanya kukosha, mashandiro ainoita mukati mari yemari. Zvakanaka, iwe unofanirwa kuziva kuti maitiro ayo mumusika wemasheya haana kunyatsoenzana. Zvikurukuru nekuti zvinowirirana nekusimba kukuru kubva padanho rimwe kuenda pane rimwe. Unogona kuwana mari yakawanda mukushanda, asi nekuda kwezvikonzero zvakafanana iwe unogona kusiya akawanda mairi munzira. Ichi ndicho chinhu chisingafanirwe kuenda chisingazivikanwe kubva ikozvino zvichienda mberi kana iwe uchida kuita kuti mari ichengetwe zvakanaka.
Makanika ayo ari nyore kunzwisisa sezvaunonzwisisa kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti mune iyo nguva dzakakura yehupfumi hukwira zvakanyanya kupfuura mamwe masheya mumisika yemari. Ipo iri muzviitiko zvakawandisa mitengo yavo inodonhedzwa nekusimba kukuru. Pamusoro pezvimwe zvirevo zvemusika wemasheya. Nemisiyano iri kunetsa kwazvo kune vese vadiki nepakati varimi. Ichave imwe yemakiyi ekubudirira kuita zviitwa zvako pamusika wemasheya.
Kune rimwe divi, cyclical stocks anowanzoita kuti aunze sarudzo dzako mumisika yemari kuti ibudirire. Nekuti zvinokubatsira iwe kwete chete kutenga masheya pamusika wekutengesa, asiwo ku bvisa kupokana. Mauri iwe yaunogona kuitisa dzakasiyana nzira dzekudyara. Neiyi nzira, iwe unenge uri muchinzvimbo chiri nani kugadzirisa zvese mashandiro auchazoita kubva zvino zvichienda mberi. Nenzira iyi iwe unonzwisisa zvirinani kuti chii chinonzi cyclical values ​​uye isu tinotokuudza iwe kuti ndeapi mamwe evamiriri vavo akakodzera Zvichida zvimwe zvezvikumbiro izvi zvinogona kutokushamisa nekuti zvakasanganiswa mune iri rakasarudzika boka remusika wemasheya.
1 Nzira yekutengesa sei cyclical stocks?
2 Zvirongwa zvekutora zvinzvimbo
3 Icho chakanaka kutenga sarudzo?
4 Kutengesa kwemasheya aya
5 Hunhu hwekutenderera masheya
6 Nei iri sarudzo yakanaka?
Nzira yekutengesa sei cyclical stocks?
Zano rako rekutanga neboka iri remakambani rinofanirwa kunge rakavakirwa pakugadzira rakarurama mutsara wekuita kuita kuti mari ichengetwe kubva panguva dzino chaidzo. Zvakanaka, kubva pane akajairika mamiriro, iwe hauzove nesarudzo kunze kwekungotenga zvine hukasha chero nguva. Nekuti panguva iyoyo, machengetedzo ane mukana wekudzokorodza pamusoro peye mamwe machengetedzo einosarudzika indekisi yeSpanish equities. Chero zvazvingaitika, iri sarudzo yekutenga yakajeka yekuita kuti kuchengetedza kubatsire mune yepakati nepakati refu.
Pane kupesana, muzviitiko zvakawandisa zvinopesana. Ndokureva, inguva yekusiya zvinzvimbo nekukurumidza. Pakati pezvimwe zvikonzero zveiyo huru nzvimbo yemitengo yavo kudzikira. Asi chii chakanyanya kushata, pasi pesimba rinomira pamusoro pezvimwe kufunga. Iwe haufanire kutarisa iyi kirasi yemitengo kana iwe uchida kuve nerunyararo runyararo rusina zvinetswa. Iko kusagadzikana mune izvi zviitiko kwakanyanyisa. Muenzaniso wakanaka weiyi mamiriro ndizvo zvakaitika makore akati wandei apfuura ku Arcelor Mitall uye izvo zvakatungamira kumitengo yavo ichidzikira kumatanho akakomberedza masere euros pachikamu.
Zvirongwa zvekutora zvinzvimbo
Mukati mezvinhu zvakakomberedza, IAG Iko kuchengetedzeka kuve muiyo portfolio nekuda kwekuratidzira kwayo kwekufamba. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti makambani akafumurwa kutenderera kwepasirese anofanirwa kutarisirwa panguva ino. Nekuti dzinoonekwa seimwe yeanokoshesa tsika kuvhura zvinzvimbo munzvimbo ino yakasarudzika. Imwe pfungwa inomiririrwa neAcerinox, iyo ichine nzira refu yekufamba. Iyo yatopfuura nemunyaya dzakaipisisa uye ikozvino zvangosara kuti zvikwire mumutengo wayo. Chero bedzi mamiriro ezvinhu ehupfumi aripo achiremekedzwa.
Imwe yezvikamu zve cyclical par kugona ndiyo inomiririrwa na zvinhu zvoumbozha. Icho chimwe cheavo vanogona kukwira zvakanyanya kubva ikozvino. Nekudaro, iwe une dambudziko rakakosha rinomuka kubva pakuti hapana kana hunhu hwehunhu uhwu muSpanish equities. Kusvika pakuti iwe unenge usina imwe mhinduro kunze kwekusiya miganhu yedu kana iwe uchida kugutsa ichi chikumbiro. Kunyanya muFrench stock market uko mazhinji eaya mareferensi emusika wekutengesa akabatanidzwa. Chero zvazvingaitika, iwo haasi emvura chaizvo kukosha saka iwe unenge uine mamwe matambudziko kugadzirisa ako kutenga nekutengesa mashandiro.
Icho chakanaka kutenga sarudzo?
Chero nzira, cyclical stocks haisi sarudzo yakanaka yekudyara kwenguva refu. Chimwe chezvikonzero chekunzwisisa mamiriro aya ndechekuti makotesheni ako azere nemahombe uploads y pasi. Kunyangwe iine kukwirira kwakanyanya mukukamurwa kwemugovano sezvo zvikamu zvavo zvinosiyaniswa nekuwanda kwavo nekudzika. Kupfuura mune kumwe kuchengetedzwa kusinga zivikanwe nekuita cyclical. Izvo zvinoenderana neprofile iwe yaunounza sediki uye wepakati investor. Nekuti zvinoenderana neshanduko iyi, unogona kusarudza imwe sarudzo muzvibvumirano kubva zvino zvichienda mberi.
Kune rimwe divi, zvichave zvakakosha kuti iwe uzive chikamu icho kambani iri kubva kune iyo yakakosha maonero. Kunyangwe iri zvakare iyo technical technical iyo iyo yainopa nguva dzese uye izvo zvinokubatsira iwe kuti usaite zvikanganiso zvakakura mukufamba kwauchazoita. Hazvishamise kuti kuchengetedzwa uku kune njodzi yakakwira kupfuura mamwe makambani. Nekuti ivo vanokwira nekudzika nehumwe nyore uye chero nguva iwe unogona kukonokerwa nekuda kwekuchinja kwavo kwakasimba mukuchinja kwemitengo yavo.
Kutengesa kwemasheya aya
Imwe pfungwa yekufunga mupfungwa dzese pachiitwa ichi ndechekuti chikamu chikuru cheavo vane chekuita nekugovewa kweaseti vanoti izvo zvakapihwa kusagadzikana kusagadzikana mune inoitika yezvematongerwo enyika kunogona kupa panguva ino, inogona kupa mamwe ehunhu hwezvikamu zvekutenderera mweya inonyanya kukosha. Chero zvazvingaitika, unenge usina sarudzo asi nyatsosarudza muchisarudzo. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvinoita sekunge chikamu chayo chekusimudzira chiri kupera. Kana zvirinani zvine hushoma hwakasimba kupfuura munguva dziri pakati pa2013 na2017. Naizvozvo, iwo achave mashandiro anozove nenjodzi yakawanda kupfuura nakare.
Kubva pane yakajairika mamiriro, iwe unofanirwa kuve unonyanya kuzvidzivirira nemhando idzi dzehunhu kupfuura pakutanga. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei mazwi ekugara kweizvi zviwanikwa achifanira kuenda yakanangana nenguva pfupi. Usatomboenderera kumberi kuti iwe urege kuwana zvinopfuura kamwe kushamisika kubva zvino zvichienda mberi. Ngwariro inofanira kuva imwe yeshongwe idzo marongero auchazoshandisa kuita kuti kuchengetedza kunobatsira zvasimbiswa. Zvirokwazvo kupfuura mune dzimwe nguva dzekare. Hazvishamise kuti iri mari zhinji yauri kubhejera nezvisarudzo zvako pachako.
Hunhu hwekutenderera masheya
Rudzi urwu rwezvakakosha zvirevo zvinochengetedza mitsara yekuita yakajairika kune vese. Neichi chikonzero, zviri nyore kwazvo kuti iwe uvazive uye usaite zvikanganiso kana uchigadzira yako inotevera yekudyara portfolio. Iwe unoda here kuziva zvimwe zvakakosha kwazvo? Zvakanaka, nyatsoteerera kuitira kuti iwe ungazoda ruzivo urwu kuti uratidze mari yako mumwedzi iri kuuya.
Idzo kuchengetedzeka kwemasheya izvo zvakabatana zvakananga neiyo shanduko yehupfumi pasi rose. Mune imwe pfungwa kana imwe sezvaungaona kubvira pakutanga.
Zvake oscillations iwo akapamhamha kupfuura mune chero chikamu, aine misiyano inogona kutodarika 5% muchikamu chimwe chete chekutengesa. Ehezve, iwo haasi akanyarara maitiro emunhu anodzivirira akacheka investor.
Iko kushanduka kwemitengo yavo yakawanda nyore kuona mune dzimwe nzira dzekuenzana. Mupfungwa iyi, ivo havazounze kushamisika kukuru nezvekukosha kwavo pamusika wemasheya.
Ivo vanopa anofungidzirwa kupa izvo zvinokutendera iwe kuti uwane iro rakakura boka rezvikamu mumisika yemari. Zvakawanda kupfuura iwe zvaungafunge pakutanga.
Kuti upinde uye ubudise zvinzvimbo zvavo, ungangoda kutarisa iyo mamiriro ehupfumi hwenyika dzese. Kupfuura dzimwe nzira dzehunyanzvi uye pamwe kunyange dzakakosha.
Iwo makambani anowanzo vanogovera zvikamu pakati pevashandi vayo. Nekuti vanopa mabhenefiti enguva dzose nguva dzose. Nedzidzo yakatarwa uye yakavimbiswa pamusoro pe3%.
Nei iri sarudzo yakanaka?
Kana mukupedzisira iwe ukasarudza iyi sarudzo mumabhizinesi, iwe unozoziva kuti vane yakakosha kukosha yekuongorora. Pese pavanenge vakanyorwa munguva dzakakura. Kune rimwe divi, iwo anozivikanwa tsika nema investor uye nekudaro iwe unozoziva zvishoma zvirinani kuti yavo mitsara yebhizinesi iri sei. Uye zvakare, ivo vanowanzoita gadziriso isinganetsi kuti vagadzire mutengo wekutarisirwa kwemwedzi mishoma inotevera. Iwe hauzombo kanganisike kana iwe ukaishandisa panguva yakakodzera.
Chero nzira, inoendeswa seimwe yesarudzo dzakawanda dzaunofanirwa kuisa mari yako. Pasi peakanyatso tsanangurwa hunhu kuti iwe ugone kushanda neaya makosheni kubva zvino zvichienda mberi. Hazvishamise kuti chikamu chakanaka chevashambadziri vane maonero akafanana. Iwe unoda kuva mumwe wavo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Cyclical masheya ekudyara mumusika wemasheya
Nzira yekugadzira yakaringana mari yekudyara mari?
Ndeapi mapizi muhomwe